ကော်ပီကူးပြီး paste မလုပ်ပါနဲ့? ဖြေရှင်းဖို့မင်းကိုသင်ပေးတယ် ငါက Mac ပါ
ကော်ပီကူးပြီး paste မလုပ်ပါနဲ့? အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ပေးတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ Mac operating system သည်တည်ငြိမ်မှုအရှိဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အရသာမရှိသောစနစ်မရှိပါ။ အကယ်၍ သင်သည်နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုအစဉ်မပြတ် update လုပ်ပါကအမှားများပါသောအပိုင်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်သောအခါ၎င်းဖြစ်နိုင်သောစနစ်ကျရှုံးမှုများကိုအလိုအလျောက်တည့်မတ်ပေးလိမ့်မည်။
အတော်လေးရိုးရှင်းသောရှုံးနိမ့်မှုများအနက်မှတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည် မိတ္တူကူးခြင်းနှင့် function ကို paste လုပ်ပါထို့ကြောင့်မည်သည့်အသုံးပြုသူကိုမဆိုလေ့ကျင့်ပါ၊ ဤ function ကိုနေ့စဉ်အသုံးပြုပါ။ အကယ်၍ ၎င်းသည်သင့်အားမည်သည့်အချိန်တွင်မအောင်မြင်ပါက၎င်းကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြပါလိမ့်မည် နည်းနှစ်နည်းဖြင့်သင့်အတွက်အလွယ်ကူဆုံးကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
ငါတို့လုပ်ရမယ် ဒီ feature ကိုပြန်လည်စတင်ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းကိုထပ်မံဖွင့်ရန်တွန်းအားပေးသည်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်သည် clipboard အားလုံးနီးပါးသို့မဟုတ်အခြားပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်သည်။
1 Option 1: Activity Monitor နဲ့အတူ။
2 2nd Option: Terminal မှတစ်ဆင့်။
Option 1: Activity Monitor နဲ့အတူ။
ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် applications ဖိုင်တွဲအတွင်းရှိသောလှုပ်ရှားမှုမော်နီတာသို့သွားမည်။
မှ Finder ကို, အောက်ပါလမ်းကြောင်းအတွက်: Applications ကို / Utilities, ဒါမှမဟုတ်,
မှ Spotlight ကိုဆက်သွယ်ခြင်း Command + Spacebar နှင့် Activity Monitor ရေးသားခြင်း။
ဖွင့်ပြီးတာနဲ့၊ ညာဘက်အပေါ်ထောင့်ရှိရှာဖွေရေးအကွက်ထဲမှာ၊ ကွမ်းခြံကုန်း
pboard option ကိုရွေးပြီးဘယ်ဘက်အပေါ်ဘက်ရှိ X ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုရပ်တန့်လိုလျှင်သတိပေးချက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်။ ကျနော်တို့အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါလိမ့်မယ် "အင်အားသုံးထွက်ပေါက်"
ဒီ function ကအလိုအလျောက်ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်တယ်။ ၎င်းသည် system ကို rebooting လုပ်ခြင်းနှင့်ဆင်တူသော်လည်း၎င်း function ကိုသီးသန့်ဖြစ်သည်။ အခု "copy and paste" function ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်အလုပ်လုပ်လားစစ်ဆေးပါ။
2nd Option: Terminal မှတစ်ဆင့်။
ဤအခါသမယတွင် ကျနော်တို့ယခင် option ကို၏ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းပြန်လုပ်ပါလိမ့်မယ်ယခုမူကား application applications သို့မဟုတ် Spotlight ကိုအသာပုတ်ပါ။ ဂိတ်။
ပြီးတာနဲ့ဖွင့်လှစ်, ငါတို့ရေးလိုက်: killall pboard ။
အခုငါတို့လုပ်နိုင်တယ် ထွက်ပေါက် terminal ကို။
ဒီအင်္ဂါရပ်ဟာ MacOS High Sierra အတွက်သီးသန့်မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်သင်အရင် macOS ရှိရင်တောင်လက်တွေ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » လဲ tutorial » ကော်ပီကူးပြီး paste မလုပ်ပါနဲ့? အဲဒါကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ပေးတယ်
နောက်ဆုံးမြင်တွေ့ခဲ့သည့် update မှ စ၍ copy / paste သည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီဖြစ်သည်။ ငါဖော်ပြခဲ့တဲ့နည်းနှစ်နည်းကိုငါကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ။ ဒါပေမယ့်ငါ့အတွက်တော့အလုပ်မလုပ်ပါဘူး ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမွမ်းမံမှုကြောင့်ဘာကြောင့်အလုပ်ရပ်တန့်သွားရသလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သိလား။ အခြားနည်းလမ်းရှိရင်ငါသဘောကျမှာပဲ။
ကူးယူခြင်း - ကူးယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်လည်းအကျိုးမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ရေးထားသည်များကိုကြိုးစားပြီးဘာမျှမလုပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏နေ့စဉ်အလုပ်များတွင်ဒီပညတ်များကို အသုံးပြု၍ ပြသနာများစွာပေးနေပါသည်။
Belen Furtado ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါ၊ နောက်ဆုံးမွမ်းမံခြင်းမှကူးယူခြင်းနှင့်ကူးယူခြင်း command များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါ။ ဒီဟာကိုဖြေရှင်းဖို့သင်ရှာခဲ့ပါသလား။
Belén Furtado အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ သူကငါ့ကိုဒီအဆင့်တွေကိုမပေးဘူး၊ ငါအကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ဖူးတယ်၊ ဘာမှမရှိဘူး ... တစ်နေ့လုံးကူညီပေးပါ၊ သူငါ့ကိုမထိစေချင်ဘူး anything
Juan Carlos Villalobos နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
Juan Carlos Villalobos အားပြန်ပြောပါ
စုစုပေါင်းပါရမီ! ငါထွက်အတင်းအကျပ်ကြောင့်ချက်ချင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့! ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စုစုပေါင်း
Pillars of the Earth - Mac အသုံးပြုသူများအတွက်နောက်ထပ်ဂိမ်းတစ်ခု
Mac နဲ့ Windows keyboard ကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲ